SAWIRO:-Musharax Faarax Cali Shire oo daahfuray inuu u shaxan yahay xilka Madaxweynaha Puntland – Madal Furan
Hoy > Warka > SAWIRO:-Musharax Faarax Cali Shire oo daahfuray inuu u shaxan yahay xilka Madaxweynaha Puntland
SAWIRO:-Musharax Faarax Cali Shire oo daahfuray inuu u shaxan yahay xilka Madaxweynaha Puntland
Editor September 16, 2018 September 16, 2018 0
Boosaaso (Madal Furan) – Murashaxa Madaxweynaha Puntland ee 2019 Faarax Cali Shire ayaa maanta Daahfuray Ololihiisa Doorashada, wuxuuna si rasmi ah u iclaamiyay inuu u taaganyahay qabashada xilkaas
Faarax Cali Shire ayaa shaaciyay inuu wax ka qaban doono arrimaha dhaqaalaha, amniga, siyaasadda, Garsoorka, Dhismaha ciidanka, hirgalinta nidaamka Dimuqraadiyadda, la dagaallanka Musuqa iyo hormarinta adeegyada asaasiga ah gaar ahaan; Caafimaadka iyo Waxbarashada.
Faarax Cali Shire wuxuu sheegay in hadii uu xilkan ku guulaysto inuu Puntland wax badan ka qaban doono islamarkaana uu dib u habayn ku samayn doono nidaamka hadda oo uu ku sifeeyay Madax ka nool, wuxuuna xusay inuu shaqo abuur u samayn doono dhalinyarada, sidoo kale mushaharka u kordhin doono ciidamada iyadoo laga dhaafayo canshuuraha laga qaado.
Faarax Cali Shire oo horay usoo noqday wasiirkii Maaliyadda xukuumaddii hore ayaa muddo ku sugnaa magaalada Bosaso halkaas oo ay soo dhaweyn ballaaran ugu sameeyeen shacabka degmada iyo guud ahaan gobolka.
Xubnaha baarlamaanka federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ma mooshin u joog baa?
DAAWO JUXA:- Intii burburku jiray waxaa ugu xun oo inagu dhacay waa Wadaad Wadaadka ka fikirka duwan ku dhifanaya shabadda Cadaabta